Global Voices teny Malagasy » Mumbai: May ny Taj Hotel · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Novambra 2008 19:47 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: India, Ady & Fifandirana, Lalàna, Saripika
Misy ny maneho ny sary nopihany amin'ny flickr sy any amin'ny toeran-kafa ankoatra izay asehon'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Sary maro dia maro ohatra no asehon'i Arun Shanbhag  amintsika ka hatramin'ny ra mandriaka, ny diantsaoka [fanaon'ny polisy amaritana ny paozin'ny olona niharandoza na tavela] ka hatramin'ny fahamaizan'ny Taj Hotel. Azonao jerena ato ny ao amin'ny flickr .
Ity indray ny sarin'ny Taj hotel tanatin'ny  afo nalain'i Soumit Kar. Sarin'ny trano fandraisam-bahiny teo ihany nalain'i Mayank Austen Soofi  tamin'izy may ny alina. Ashesh Shah  kosa naka ny sarin'ny nanorenana ireo tohatra fianihana sy fibatana enta-mavesatra hanatanterahana ny asam-pamonjena voina.
Toerana malaza ahafantarana an'i Mumbai ny Taj Mahal Hotel  . Sary aseho mandrakariva ho toy ny fivantanana aorian'ny varavaram-be fidirana any India, toerana manantantara fivantanan'ny olona malaza manerantany ny efitrano ao. Ny tena nanohina ny mpamaham-bolongana moa dia mbola eo ampirehetana ilay toerana, ary efa ravan'ny afo ny efitra ambony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/11/28/1387/
 Arun Shanbhag: http://arunshanbhag.com/2008/11/26/mumbai-blasts-taj-is-burning/
 Taj hotel tanatin'ny: http://www.flickr.com/photos/soumik/3062552495/
 Mayank Austen Soofi: http://www.flickr.com/photos/mayankaustensoofi/3063176870/
 Ashesh Shah: http://www.flickr.com/photos/ashesh-shah/3062877211/